မတျ 17, 2020 – Healthy Life Journal
ယောဂကျင့်သူတို့အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် အစားအသောက်များ
စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်တွင်းရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ရင် အဆစ်နာကျင်ကိုက်ခဲတာ၊ နှာခေါင်းပိတ်တာ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ရူမတွိုက်အဆစ်ရောင်နာနဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်း ဝေဒနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ယောဂကျင့်တာကြောင့် ကိုယ်တွင်းရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယောဂကျင့်သူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသောက်ပေးရင် ကိုယ်တွင်းရောင်ရမ်းမှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါတယ်။ (၁)...
ဦးနှောက်အတွက် အကောင်းဆုံး ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင်စားတဲ့အစားအစာထဲမှာ ဒီဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်တွေ ပါရဲ့လား။ ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင် အများစုနဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေဟာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အာနိသင်များစွာ ပါဝင်နေပေမယ့် ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့တော့ မသိခဲ့ကြပါဘူး။ လေ့လာမှုတွေက အောက်ပါဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်လေးမျိုးဟာ ဦးနှောက်အတွက် ကောင်းကျိုးများစွာ ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားတဲ့အတွက်...
ကျောက်ကပ်အစားထိုး ကုသအောင်မြင်ပြီး ၃၂ နှစ် ကြာပြီဖြစ်သည့် ဦးနေ၀င်းအောင်
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်တွင် ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှု ခံယူခဲ့ရသော ဦးနေ၀င်းအောင်သည် ယခုအသက် ၅၈ နှစ်အရွယ်ရောက်သည်အထိ ကျန်းမာစွာဖြင့် မိသားစုနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်လျက်ရှိရာ သူ၏ ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှု အတွေ့အကြုံကို ယခုလို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါသည်။...
အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်အရွယ်တို့ ခရီးသွားမည်ဆိုလျှင် . . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အမေက အသက် ၆၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ ခရီးထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ ပင်လယ်ကမ်းခြေကို ခေါ်သွားချင်လို့ပါ။ ခရီးပန်းတာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ခရီးသွားတာ ကောင်းပါတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသကို သွားတာက...